AVG: “Mila arovana manokana ny harena voajanahary” | NewsMada
AVG: “Mila arovana manokana ny harena voajanahary”
Niarahaba ny filoham-pirenena vaovao, Rajoelina Andry, ny vovonana fiarahamonim-pirenena, Alliance voahary gasy (AVG), ivondronan’ny fikambanana miaro ny tontolo iainana malagasy. Nisaorany koa ny tompon’andraiki-panjakana, ny olom-boafidy sy ny olom-boatendry, ny sehatra tsy miankina, indrindra ny vondron’olona eny ifotony niara-niasa tamin’ny AVG hatramin’izay, vokatry ny fijoroana amin’ny fahamarinana.
Mampahery ny filoha Rajoelina ny AVG hanome ohatra tsara sy hahay hifehy ny tompon’andraikitra samihafa mikasika ny fitantanana maharitra ny harem-pirenena ary miangavy azy “hampitsahatra ny gaboraraka nisy hatramin’izay”.
Hanara-maso ny eny ifotony
Manao antso avo amin’ny governemanta vaovao hijoro ity fikambanana ity hanaja ny fomba fiasa sy ny lalàna. Toraka izany koa ny manam-pahefana any amin’ny faritra, ny distrika sy ny kaominina ho mailo amin’ny fitrandrahana sy ny fandripahana tsy ara-dalàna ny harena voajanahary satria hitany eo ambany masony izany. Antsoiny, toy izany koa, ny mpiray tanindrazana tsy ankanavaka hanara-maso eny ifotony.
Arofanina sy aroriaka
Manamarika ny AVG, fa tsy miandany sady tsy manohitra politika amin’ny maha fiarahamonim-pirenena azy fa arofanina sy aroriaka ary mety hifanandrina amin’ny fanjakana raha voatohina ny tombontsoam-pirenena. Antontan-kevitra mitombina sy voaporofo no iaingan’ny fiarahamonim-pirenena entiny miasa sy mihetsika.
Marihina fa nahavita ny fivoriamben’ny mpikambana ny AVG, ny 17 sy ny 18 janoary teo. Lasa ho 30 indray ny mpikambana, niampy ny Fafito avy ao amin’ny Fiangonana loteranina malagasy sy ny fikambanana tantsaha Fekritama. Voafidy ho filohan’ny Filankevi-pitantanana indray, Razakamanarina Ndranto.